Shiinaha SOC iyo gacanka waxaa ku jiray baako batari 36V 40Ah LiFePO4 oo loogu talagalay mootada korantada / mootada / gawaarida soo saaraha iyo alaab-qeybiye | LIAO
1. Gacanta iyo SOC 36V 40Ah LiFePO4 baakad batteyr ah oo loogu talagalay baabuurka qumman.
2. Dheecaan sare: imika qulqulka ugu badan wuxuu noqon karaa 80A oo ah 2C.
Qaabka Lambar CGS-F3640N
Awoodda magaceed 36V
Awoodda magaca 40Ah
Ugu badnaan lacag joogto ah 80A
Ugu badnaan dheecaan joogto ah 80A
Miisaanka Qiyaastii 20kg
Cabbir 305mm * 168mm * 230mm
Codsiga Gaarka ah gawaarida gawaarida, dalabka korantada, ect.
3. Dahaarka birta ee SOC iyo gacanta.
4. Nolosha wareegga dheer: cell lithium iron phosphate cell battery, oo dib loo shubi karo, wuxuu leeyahay in kabadan 2000 wareeg oo 7 jeer ah batteriga aashitada rasaasta.
5. Miisaanka Fudud: Qiyaastii kaliya 1/3 culeyska baytariyada aashitada leedhka.
6. Waxqabadka wanaagsan ee amniga: LiFePO4 waa nooca batari lithium-ka ugu amaanka badan ee laga aqoonsanyahay warshadaha.
7. Tamarta cagaaran: Ma laha wax jiidis ah oo xagga deegaanka ah.
Baabuurka birta ku xiraya uma baahna qaabeynta barta gaarka ah. Waa la isticmaali karaa ilaa inta si buuxda looga soo dalacayo. Waa mid aad u habboon in la isticmaalo. Qalabka guud waa: jiifku wuxuu ka samaysan yahay bir, qolofka kore wuxuu ka samaysan yahay caag la xoojiyay oo ka samaysan fiber fiber.
Batariga gawaarida gawaarida: Waxay ka samaysan tahay alaabada caaga ah ee la adkeeyay ee muraayadaha ilaaliya deegaanka hal mar, qaybaha birta waxaa lagu buufiyaa oo la dubay, oo lagu qalabeeyay maqal sare, meeleyn, laydh, shaqooyinka waqtiga, iwm. -faad, bey'ada u fiican, daxalka u adkaysta, Waxay leedahay astaamaha xasiloonida wanaagsan, muuqaalka quruxda badan, qaabka cusub, waxqabadka wanaagsan ee nabadgelyada, iyo goobo fara badan oo kala duwan. Waa qalab madadaalo caan ku ah suuqa iyo carruurta.
Xaqiiqdii, sida ku xusan falanqaynta waxqabadka isticmaalka, amniga, sahlanaanta, xawaaraha iyo sababaha kale ee gawaarida gawaarida, gawaarida gawaarida waxaa loo qeybin karaa: Tiandi.com gawaarida gawaarida iyo gawaarida bateriga. Labadan qaybood, dabcan, waxay ka tirsan yihiin baaxadda isticmaalka iyo isticmaalka baabuurta birta ku dhejisa. Ayaa ugu weyn.
In kasta oo gaariga batteriga bumper-ka yahay wax soo saar heer sare ah oo ka socda warshadaha gawaarida gawaarida, haddana isla qeybta ay ku jiraan gawaarida bateriga, gawaarida gawaarida ee heerarka tayada kala duwan ayaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo waxqabadka mootadooda.
Hore: Waxqabadka sare ee tayada wanaagsan 24V 60Ah LiFePO4 baakid batari loogu talagalay AGV
Xiga: Batari mover mover batroolka LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 baakid batari leh xeedho gudaha ku jirta iyo SOC